पत्रकार ढुंगानालाई सूचक साहित्य पुरस्कार – Everest Times News
पत्रकार ढुंगानालाई सूचक साहित्य पुरस्कार
२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार ०९:१९
काठमाडौं । पत्रकार एवं साहित्यकार गोपीकृष्ण ढुंगानालाई यस वर्षको सूचक साहित्य सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । सूचक प्रकाशनले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्राध्यापक सुवर्ण शाक्यले ढुंगानालाई पुरस्कृत गरेका हुन् । ढुंगानाले दुई गजल संग्रह प्रकाशित भएको छ भने दुई म्यूजिक भिडियोसहित एक दर्जन गीत रेकर्ड भएका छन् । उनले १० बाल कृति प्रकाशन र २२ बालकृतिको सम्पादन गरिसकेका छन् ।
सूचकले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने चार व्यक्तित्वलाई पुरस्कृत र एकजनालाई सम्मान गरेका छ । सूचक रतन युवा पुरस्कार भिक्षु उपतिस्स महास्थवीर, सूचक पद्मादेवी समाजसेवा पुरस्कार माया मानन्धर, सूचक कृष्णबहादुर समाजसेवा पुरस्कार लालबहादुर चौधरी, सूचक लिली नवप्रतिभा पुरस्कार नानीहेरा शाक्य र सूचक सम्मान रत्नसुन्दर शाक्यलाई प्रदान गरिएको हो ।
पुरस्कार प्रदानपछि प्राध्यापक शाक्यले गौतम समाज र देशका लागि समर्पित स्रष्टा र व्यक्तित्व भएका प्रतिभाहरुलाई सम्मान गर्न गर्न सके सक्रियता बढ्ने बताए । उनले बुद्धको शिक्षा र उपदेशलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके जनहित हुनेमा जोड दिए । प्रकाशनका अध्यक्ष दिपक भेटवालले बुद्ध शिक्षा र उपदेशलाई आत्मसात गर्दै जनमनमा पु¥याउन सकेमात्र समाजमा सुख र शान्ति प्राप्त हुने बताए ।
कार्यक्रममा बौद्ध विद्धान डा. केशरीलक्ष्मी मानन्धर, बज्रयान महाविहार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र बज्राचार्य, डा. लक्ष्मण शाक्य, साहित्यकार हरिप्रसाद पाण्डेयलगायतले धारणा राखे । प्रकाशनले १० वर्षदेखि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई वर्षेनी पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।